WAXYAABAHA DABIICIGA AH EE UKRAINE EE 5TII SANO EE LA SOO DHAAFAY KORODHAY 90% - UKRAINE
Taras Kutovoy, Wasiirka Beeraha iyo Cuntada Ukraine, furitaanka shirweynihii ugu horreeyay ee caalamiga ah "Organic Ukraine 2017. Horumarinta Suuqa Beeraha ee Ukraine - laga bilaabo soosaarka ilaa iibinta," ayaa sheegay in tirada warshadaha soo saara waxsoosaarka caadiga ah kordhay 90%, noqoshada mid ka mid ah warshadaha ugu firfircoon. Sida laga soo xigtey wasiirka, kaliya 400,000 hektar oo hektar ah ayaa hadda loo qoondeeyay alaabada dabiiciga ah. "Waxaan rumeysanahay in shaxdani ay kordhi karto dhowr jeer si fudud," ayuu yiri Taras Kutovoy oo wuxuu carabka ku adkeeyay waxtarka laga qabo badeecada organic ee suuqa adduunka. "Wadahadaladan, wada-hawlgalayaasha caalamiga ah ayaa sheegaya in xaalado gaar ah, inkastoo dhowaan suuqyadooda ay soo dhoofiyaan, waxay diyaar u yihiin in ay aqbalaan alaab-dhaqameedyada, waxaan u arkaa tilmaan aad u wanaagsan, dhab ahaantii, baahida loo qabo badeecada organic waa mid aad u weyn," ayuu wasiirku carabka ku adkeeyay.
Xusuusnow in uu ahaa horumarinta wax soosaarka beeraha oo noqday mudnaanta shaqada Wasaaradda Beeraha ee 2017, taas oo lagu dejiyey sharci gaar ah, kaas oo horeyba taageero uga heley Wasaaradda Wasaaradaha.